Kedu otu esi enyere ndị agadi aka site na ọdịda? | Ngwọta OMG
Kedu otu esi enyere onye meworo agadi aka site na ọdịda?
Lee ụfọdụ n'ime ụzọ ndị nwere ike inyere onye mere agadi aka ida -
Dịka nchọpụta si kwuo, a chọpụtala na inwe ntakịrị njem mgbe nri ehihie gị nwere ike ịzọpụta ndị agadi site na ọdịda. Nke a na-esote ọnụ ala nrịgharị ọbara.
Inwe obere ije mgbe ị na-eri nri, na-edugakarị na ọnụ ọgụgụ dị nrịgo.
Inwe obere iko mmiri na nri gị, zere ọtụtụ nsogbu nke hypotension.
Ugbu a - a - ụbọchị ngwa ngwa ahụike dị iche iche dị, maka igwe smart gị. Nke a ga-eme ka ọnọdụ dị iche iche na-akpaghị aka wee mekọrịta ya na kọmputa gị. Ọzọkwa, ọ ga-achọ enyemaka na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ọ chọtara ihe na-adịghị mma.
Di iche iche na ihe ntanetiri ihe omuma na usoro nke ikpo igwe nke ga achoputa ihe obula di iche ma gwa ndi gi huru n'anya. Nke a na-enye nzuzo dị ukwuu ma na-arụ ọrụ ọbụlagodi mgbe a kpaliri ala gị.
Nke a na nkà na ụzụ nwekwara ike a ga-eji maka nsụgharị ndị ahịa, na n'ụlọ nche nlekota oru nzube.
Ngwaọrụ kachasị mma bụ ndị nwere ike na-achọpụta ọdịda. Na, nke na-akpọ ọkpọka ikesa nkesa nke ụlọ ọrụ, onye ga-eme ihu ihu igwe ka ihe niile dị mma ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ, ha ga-akpọtụrụ ọrụ mberede.
Nke a ga-enye aka ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ nọ n'ụjọ, amaghị ama na ọ bụrụ na ọ / echefu ihe ndị a n'oge ahụ.
Ya mere, e nwere ọtụtụ usoro mberede nke dị na ahịa. Kedu onye ị ga - ahọrọ?
N'ebe a, anyị edepụtara ụfọdụ usoro nche nchebe dị elu na-adị n'ọma ahịa.
Onye nlekọta ahụike
Usoro nlezianya nke Guardian bụ otu n'ime usoro mgbasa ozi ọgwụ. Ọ na - enyere ndị ọrụ aka ịkwaga mita 400, site na njikwa ahụ mgbe echekwara ha. Ị nwere ike eyiri ya na belt, n'akpa uwe, nkwekọrịta, olu ... Ndụ batrị ya dị gburugburu 32 awa. I nwekwara ike na-eyi ya n'èzí ụlọ gị, na enyere GPS aka. Ozokwa, ọ na-enyekwa ọnọdụ nwere mmetụta dị ọkụ, nke pụtara na ọ nwere ike ịchọpụta okpomọkụ dị oke.
Onye nlekọta ahụike dị mfe ịwụnye ma ụlọ ọrụ nyere 24 * 7 helpline. Onye ọrụ ahụ bụ 911 kwadoro nke pụtara na ị nwere ike ịkpọọ ụgbọ ala ozugbo.
A makwaara ndụ ndụ maka nzube nlekọta ahụike. Ogologo ya dị gburugburu 146 mita. Akara eji eji mmiri adịghị. Ndụ batrị ya bụkwa oge 32. Nke a bụ ntọala cellular ma ị nwere ike iji nke a n'èzí ụlọ gị.
Ndụ na-enye 24 * 7 nkwado ahịa. Maka iji ọrụ a, ị ga-edebanye nkwekọrịta. Otú ọ dị, ọ dịghị ụgwọ a na-akwụ ụgwọ n'oge ịkagbuchara nkwekọrịta gị.
Medical Alarm Medical
Medical Alarm Medical nwere ọtụtụ mita 305. Oge ahụ bụ mmiri na-enweghị mmiri na 32 awa nke ndabere batrị.
Otu n'ime atụmatụ kachasị mma nke ngwaọrụ a bụ na ọ na-enye carbon monoxide na nlekota anwụrụ ọkụ.
Ma na akụkụ na-adịghị mma ọ naghị akwado GPS nke pụtara na ịnweghị ike iji ya na-apụ n'ụlọ gị. Njikwa ya nwere bọtịnụ Enyemaka nke dị mfe iji pịa ọnọdụ ndị siri ike.
“Kwadebe ma gbochie, arụkwala ma chegharịa.”
Ọ bụrụ na ịchọta ndị ikwu gị, ndị òtù ezinụlọ, ndị enyi gị, ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị adaala. Mgbe ahụ, kpọtụrụ dọkịta gị n'egbughị oge ọ bụla, tupu ya agbakee. Olee otú iji nyere onye agadi aka ịdaba na ọdịda?
Nzuzo 7725 6 Echiche Taa